Ndị na-egwupụta ụlọ igwe IDC dị elu nwere ọkwa nke 50mm
1. Ọ na-anabata chassis 4U, nke na-ezute ọkọlọtọ ụlọ igwe igwe IDC, ma nwee ike ịgba ọsọ n'ime ụlọ igwe IDC.N'otu oge ahụ, chassis na-eji igwe oyi na-atụ 1mm na-ekpo ọkụ, a na-ejikwa teknụzụ na-agbapụta ájá na-edozi elu ya, nke na-adịghị mfe nchara.
2. The n'ihu panel adopts a nnukwu-mpaghara mmanụ aṅụ perforated imewe, nke dị mma maka okpomọkụ dissipation.Owu na-adịghị ekpuchi uzuzu a rụrụ n'ime ya nwere ike kewapụ uzuzu ma hụ na ịdị ọcha dị n'ime onye na-egwupụta ihe.
3. The n'ihu panel usoro nwere a wired netwọk ọdụ ụgbọ mmiri, HDMI ọdụ ụgbọ mmiri, USB n'ọdụ ụgbọ mmiri, nrụpụta mgbanwe, na-onwem na a ndịna-emeputa kaadị arụ ọrụ ọnọdụ nchọpụta usoro, nke nwere ike ngwa ngwa mata ọnụ ọgụgụ nke ndịna-emeputa kaadị na-ezighị ezi ndịna-emeputa kaadị.
4. Ọkọlọtọ ọkụ ọkụ 1800W dị elu na-enye nkwa maka ịrụ ọrụ dị mma nke igwe Ngwuputa.N'otu oge ahụ, enwere ike itinye ọkụ eletrik na ọkọlọtọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ maka mgbasawanye dị mfe.
5. Nhazi ọkọlọtọ bụ 6 ngwa ngwa jụrụ oyi na-agba ọsọ nke 4700RPM na oge ndụ ruo awa 50,000.Onye na-akwado ya nwere nhazi convection nke ọwa abụọ yana ịrụ ọrụ mkpofu ọkụ siri ike.
6. Ejiri ya na B85 chip motherboard, nkewa nkewa, 8-card in-line miner ikpo okwu, arụ ọrụ kwụsiri ike na nhazi dị mma.
7. The ndịna-emeputa kaadị na-kwadoro iche iche iji belata ihe ize ndụ nke mmebi na motherboard n'ihi ibubiga ihe ókè, na ndịna-emeputa kaadị na-arụ ọrụ ọzọ stably.
bọọdụ shunt ike
Ụgbọ elu azụ oghere
1. Ị bụ onye nrụpụta ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ndị na-emepụta igwe na-egwuputa ihe na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 6 nke mmepụta ọkachamara na ahụmahụ ahịa.
Anyị na-etinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ire ahịa nke ngwaahịa ndị metụtara blockchain Mining Machine kemgbe 2015. Anyị nwere mmepụta ọgaranya na ahụmahụ ahịa ma kwesị ntụkwasị obi gị.Anyị nwekwara guzobe a ọkachamara mgbe-sales otu na mba ọzọ ahia otu iji hụ na onye ọ bụla ahịa mkpa na-egbo dị ka o kwere mee.
Nke gara aga: Oghere chassis dị jụụ 70mm
Osote: Igwe ihe ngwuputa 65mm 8gpu kacha ewu ewu
Motherboard 8 kaadị in-line / PCIE/ oghere 50mm
Ịnye ọkụ 1U: 1800W
Ogologo kaadị nkwado 330mm
Onye ofufe 6 Fan (DN12cm) 4700RPM
oghere kaadị TF Oghere kaadị TF * 1
Ihe eserese kaadị ibu LED LED * 12
Nha chassis 650MM(L)*445MM(W)*178MM(H)